weplay – Gaming Noodle
Dota2 လောကရဲ့ အမျိုသမီး Panelist အသစ်စက်စက် “Ephey” အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း ယခုလ အစောပိုင်းအတွင်း စတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ WePlay AniMajor ဟာ Dota2အသင်းများအတွက် TI10 ပြိုင်ပွဲကြီးဆီ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိနိုင်မယ့် နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပါ။ ဒါကြောင့် ပွဲစဥ်များအတွင်း ကစားသမားများဟာ အကြိတ်အနယ်ကြိုးပမ်းယှဥ်ပြိုင်နေခဲ့ကြသလို ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ ပုံရိပ်ကို ဂျပန် anime အငွေ့အသက်များနဲ့ ထူးခြားစွာ ဖန်တီးထားတာကိုလည်း ပရိသတ်များ သတိထားမိကြမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲရဲ့ anime အသွင်အ​ပြင် panel များအတွင်း လိုက်ဖက်ညီစွာ ပါဝင်လာသူကတော့ ချောမောလှပတဲ့ အမျိုးသမီး panelist အသစ်တစ်ဦးဖြစ်သူ Mira “Ephey” Riad ပါ။ Ephey ကို panelist …
Dota2 လောကရဲ့ အမျိုသမီး Panelist အသစ်စက်စက် “Ephey” အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း Read More »
[Unicode] လုပ်ပွဲကစားလို့ Pushka League ဆက်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတဲ့ Dota2အသင်း CyberTRAKTOR ယူကရိန်းအခြေစိုက် Esports ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ WePlay! ဟာ CIS ဒေသရဲ့ Dota2အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ CyberTRAKTOR ကို Pushka League Division2ပြိုင်ပွဲအတွင်း ဆက်လက် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် မပြုတော့ပဲ ရွှေ့ဆိုင်းပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ CyberTRAKTOR အသင်းဟာ ယင်းပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာ လုပ်ပွဲကစားခဲ့ကြောင်း WePlay! က ယူဆတဲ့အတွက် ယခုလိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့က ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြတဲ့ WePlay! Pushka League Divison2ရဲ့ BO3 ပွဲစဉ်များမှာ CyberTRAKTOR အသင်းဟာ ပြိုင်ဘက်အသင်း …
လုပ်ပွဲကစားလို့ Pushka League ဆက်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတဲ့ Dota2အသင်း CyberTRAKTOR Read More »